umbuzo izindululo moya
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo - iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #292 by JanneAir15
Molo! Ndinombuzo kwakhona. Ndifuna i Airbus A380 kodwa kukho zininzi (payware kunye freeware). Ndingathanda ukwazi ukuba yeyiphi Ndifumana. Akukhathaliseki na payware okanye freeware logama nje kulungile.
Ukuba nawe unengxaki ukukhetha moya omhle kuwe andathumela umbuzo wakho apha!
Ndiye sele akuyifumana esiphezu kweli phepha. Kodwa ndisenawo umbuzo omnye ngayo loo moya. Ngaba ungeza liveries isiko kuyo?
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye-2 inyanga edlulileyo JanneAir15.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #293 by Dariussssss
Mna kwakhona ngokusebenzisa lowo, kwaye akukho konke konke. Bendizama ukufakela liveries, kodwa ngenxa yesizathu esithile, ukuba ayisebenzi ... mhlawumbi Ndonakele yinto.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #330 by Gh0stRider203
Dariussssss wabhala: ndiza kwakhona ngokusebenzisa lowo, kwaye nto konke konke. Ndandizama ukufaka liveries ngakumbi, kodwa ngenxa yesizathu esithile, oko bengasebenzi ... mhlawumbi Ndonakele kwi into.
na ukuguqula le fayile aircraft.cfg ngokunjalo?
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #332 by Dariussssss
Nto, kodwa, lo livery efakiweyo zange ebonisa phezulu ... andazi kutheni.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #334 by JanneAir15
Ndicinga ukuba ndiyazi ukuba kutheni. Loo moya ekuqaleni FS9. Ngaba wena ufumane livery ekunene loo moya? Ndakhangela phezulu iphepha Project Airbus kwaye kukho A380 for FS9 (indiza njengoko kweli phepha kodwa ukuba ilungiswe apha naphaya ukuze FSX) ngoko ke andingowawo ukuba yintoni na ekufuneka uyenze ukuze ufumane liveries ukusebenza kakuhle. Ndiza kuzama ukwenza into ukuze ufumane liveries ukusebenza uze ubaxelele apha.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #338 by Dariussssss
Jonge phambili kuyo. Efanayo apha, ziya uzame kwakhona.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #339 by Dariussssss
Ngoko ke, akukho unayo. Ndakwazi ukufaka livery ibe '' zethu '' A380 kwaye iyasebenza.
Indlela yokwenza lo ... Okokuqala, khangela ukhuphele kuphela A380 texture ofuna ukufaka. Ungafumana okuninzi kubo Avsim. Beka ifolda yokwakheka ukuya PA A380 ulawulo, ifayile ivula kwaye uhlele moya .cfg. Qiniseka ukukhangela ukuba ukuguda noburhabaxa edityaniswe sim yakho, kulo mzekelo, i FSX.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #342 by JanneAir15
Ok, enkosi ndiza kuzama ukuba.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #343 by Gh0stRider203
JanneAir15 wabhala wathi: Mna ndicinga ukuba kutheni. Loo moya ekuqaleni FS9. Ngaba wena ufumane livery ekunene loo moya? Ndakhangela phezulu iphepha Project Airbus kwaye kukho A380 for FS9 (indiza njengoko kweli phepha kodwa ukuba ilungiswe apha naphaya ukuze FSX) ngoko ke andingowawo ukuba yintoni na ekufuneka uyenze ukuze ufumane liveries ukusebenza kakuhle. Ndiza kuzama ukwenza into ukuze ufumane liveries ukusebenza uze ubaxelele apha.
iintlanzi! Andizange ndicinge ukuba lol
Ixesha ukwenza page: 0.296 imizuzwana